८५ वर्षको बृद्ध व्यक्ति किन पार्टीको महामन्त्री भयो ? • ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
प्रकाशित मिति : 15 July, 2019 2:44 pm
नेकपा (मसाल)को आठौँँ महाधिवेशन भइरहेको बेलामा वा त्यसपछि पनि विभिन्न अनलाइन, बिभिन्न पत्रपत्रिका वा सामाजिक सञ्जालहरूमा कैयाँैं भ्रामक प्रचार गरिएका छन् । त्यसबारे प्रकाश पार्नका लागि यो लेख लेखिएको छ ।
विभिन्न कोणबाट फैलाइएका त्यसप्रकारका भ्रमहरूबारे प्रकाश हाल्नुभन्दा पहिले यसप्रकारका भ्रमहरू कसले फैलाउने प्रयत्न गरेको छ र त्यसका पछाडिको नियत के हो ? त्यसबारे केही प्रकाश हाल्नु पर्ने आवश्यकता छ । पार्टी महाधिवेशनका बेलामा चलेको दुईलाइनको सङ्घर्षको सन्दर्भमा पार्टीभित्र वा कतिपय स्वीकृत विषयहरूमा पार्टी बाहिर पनि, जस्तै कि चीन र भारत साम्राज्यवादी देश हुन् वा होइनन् ? भन्ने विषयमा बेग्लाबेग्लै मतहरू प्रकट हुनु स्वभाविक नै थियो । त्यो पार्टीभित्रको जनवादको परिचायक थियो । तर, महाधिवेशन समाप्त हुनुका साथै पार्टीभित्र वा कतिपय विषयहरूमा सार्वजनिक रूपले पनि मतभेदको चरण समाप्त भएको छ । पार्टीका कुनै सदस्यहरूलाई अहिले पनि आफ्ना मतभेदहरू राख्ने अधिकार छ । तर, त्यो कार्य पार्टीको विधान वा नियमअनुसार वा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार नै चल्ने कुरा हो । त्यसप्रकारका मतभेदहरूलाई पार्टीभित्र सबैतिर वा सार्वजनिक रूपमा पनि बाहिर लैजाने कार्य कुनै पनि पार्टी सदस्यले गर्न मिल्दैन । निश्चय नै कतिपय अवस्थामा पार्टीमा पार्टीका इमान्दार सदस्यहरूद्वारा पनि त्यसप्रकारका गल्ती वा कमजोरी हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, ती अपवाद कार्यहरू हुन्छन् र पार्टीको विधान वा नियमअनुसार तिनीहरूलाई समधान गर्ने वा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्दछ । तर, हाम्रो पार्टीको आठौँँ महाधिवेशनबारे कैयौँ व्यक्ति वा पक्षद्वारा लगातार, सनियत वा योजनावद्ध प्रकारले नै भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि पार्टीको कुनै इमान्दार वा अनुशासित सदस्यद्वारा त्यसप्रकारको कार्य गरिंदैन र गरिएको छैन पनि भन्ने कुरामा हामी पूरा विश्वस्त छाँैं । अनि प्रश्न उठ्दछ, त्यसप्रकारको कार्य कसले गरिरहेको छ ?
भारतको सोहरतगढमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका एकजना बृद्ध कामरेड शीतलप्रसाद हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो उमेरमा उहाँले ठूलाठूला आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्नुभएको थियो र त्यहाँको पार्टीको प्रान्तीय समितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो । तरपछि करिब पचासी वर्षको उमेरमा पुगेर शारीरिक रूपले धेरै नै कमजोर भएपछि सोहरतगढको स्थानीय टोलको सेलमा बसेर काम गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । त्यही प्रकारले आज पार्टीले मलाई महामन्त्रीमा निर्वाचित गरेको छ भने त्यसले भोलि मलाई सल्लाहकारमा राख्न, कुनै जिल्ला कमिटीमा राख्न वा मेरो आफ्नो गाउँ ओखरकोट वा अन्यत्र कतै सेलमा पनि राख्न सक्दछ । त्यो मेरो काम गर्नसक्ने क्षमता, स्प्रिट वा पार्टीले कुनै पार्टी सदस्यलाई कहाँ राखेर वा कुन जिम्मेवारी दिएर काम गराउनु उचित हुन्छ ? त्यस आधारमा निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यो बाहेक कुनैबेला एउटै समयमा पनि पार्टीमा महामन्त्री, जिल्ला पार्टीको सेक्रेटरी वा एरिया कमिटीका सदस्यहरूका लागि पनि कैयौँ पार्टी सदस्यहरू उपयुक्त हुन सक्दछन् । उनीहरूमध्ये सबै व्यक्तिहरू महामन्त्री, कुनै कमिटीको सेक्रेटरी वा कुनै कमिटीका सदस्यहरूमा सबै जना निर्वाचित हुन सक्दैनन् । त्यो अवस्थामा कुनै पद वा कमिटीका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरू मध्ये कसलाई निर्वाचित गर्ने ? त्यो सम्बन्धित कमिटीले निर्णय गर्ने कुरा हो ।
२. आठाँैं महाधिवेशनले दक्षिणपन्थी दिशा समातेको छ ।
आठौँँ महाधिवेशनले एकातिर, माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र रणनीति तथा, अर्कातिर, अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै आफ्नो कार्यक्रम, रणनीति वा तात्कालिक नीतिहरू निर्धारित गरेको छ । निश्चय नै, जसले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा रणनीतिप्रति सही दृष्टिकोण अपनाउँदैनन् वा तत्कालको वस्तुस्थितिमाथि सही प्रकारले विचार गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले अहिले हाम्रो पार्टीको आठौँँ महाधिवेशनले लिएको सही कार्यदिशालाई दक्षिणपन्थी देख्ने गरेका छन् । वास्तवमा देशका बेग्लाबेग्लै राजनीतिक शक्ति वा तत्वहरूले विषयहरूलाई हेर्ने आफ्नो बेग्लाबेग्लै कोणअनुसार नै हाम्रा नीति वा निर्णयहरूलाई व्याख्या गर्ने वा बुझ्ने गर्दछन् । राजावादीहरूले हाम्रो गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षताको सोचाइलाई गलत बताउँछन् । त्यसैगरेर उग्रवामपन्थीहरूले पनि गणतन्त्रको रक्षामा जोड दिने हाम्रो नीतिलाई गलत बताउँछन् । सङ्घीयताका पक्षपातीहरूले सङ्घीयताको विरोध गर्ने हाम्रो नीतिलाई गलत बताउँछन् । नेकाले हाम्रो भारतीय साम्राज्यवादप्रतिको नीतिलाई विरोध गर्दछ । त्यही प्रकारले अन्य विभिन्न पक्षहरूले पनि आफ्नोआफ्नो राजनीतिक मान्यता वा दृष्टिकोणअनुसार नै हाम्रा नीति वा कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन वा आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा नै कसैले हाम्रो पार्टीका नीति वा कार्यक्रमहरूलाई दक्षिणपन्थी आक्षेप लगाएको आलोचनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । कतिपय पक्षहरूले आफ्नो पूर्वाग्रह वा हामीप्रतिको द्वेषपूर्ण दृष्टिकोणका कारणले जुनसुकै प्रकारले वा जुनसुकै रूपमा भए पनि हाम्रो विरोध गर्ने उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर नै हाम्रो पार्टीको आलोचना गर्ने वा गालीगलौज पनि गर्ने गरिरहका हुन्छन् । त्यस्ता तत्वहरूको लागि कुनै नीतिको प्रश्न प्रधान हुँदैन, तर जुनसुकै रूपमा भए पनि विरोध गर्ने उद्देश्य नै प्रधान हुन्छ । त्यसकारण उनीहरूको हाम्रो पार्टीको आठौँँ महाधिवेशनका निर्णयहरूलाई दक्षिणपन्थी ठहराउने आक्षेपले कुनै अर्थ र महत्व राख्दैन ।
३. आठौँ महाधिवेशनमा जनवादको हनन् गरियो ।
यो अत्यन्त निम्नस्तरको र निराधार आलोचना हो । आठाँैं महाधिवेशनको सिलसिलामा जनवादको जुन उच्च रूपमा प्रयोग वा अभ्यास गरिएको छ, त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहास वा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा नै कहिल्यै गरिएको थिएन । नेपालको राजनीतिको वा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सरसरी वा सामान्य प्रकारको ज्ञान भएको मानिसबाट पनि त्यो लुक्ने कुरा होइन । आठौँँ महाधिवेशनभन्दा पहिले बहुमत र अल्पमतका दस्तावेजहरूमा पार्टीभित्र देशव्यापी रूपमा छलफल चलाइएको थियो । फोरमद्वारा सबै पार्टी सदस्यहरूलाई पार्टीका नीति वा नेतृत्वबारे आफ्ना मतभेद वा आलोचनाहरू प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिइएको थियो । महाधिवेशनमा पनि सबै प्रतिनिधि वा पर्यवेक्षकहरूलाई ग्रूपहरूमा वा जनरल प्रकारले छलफल चलाउने अधिकार दिइएको थियो । आलोचना र आत्मालोचनाको कार्यक्रमअन्तर्गत महामन्त्री वा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको आलोचना गर्ने अधिकार दिइएको थियो वा स्पष्टिकरणबाट चित्त नबुझेको अवस्थामा महामन्त्री वा पार्टी केन्द्रका कुनै सदस्यका विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप लगाउने र त्यसबारे छलफल चलाउने पनि अधिकार दिइएको थियो । केन्द्रीय समितिको चुनावको सिलसिलामा केन्द्रले प्रस्तुत गरेको प्यानल बाहेक अन्य उम्मेदवारहरू खडा हुने अवसर पनि दिइएको थियो, यद्यपि केन्द्रीय समितिको लागि प्रस्तुत प्यानल बाहेक अरू पनि कोही उम्मेदवार नबनेकाले सर्वसहमतीले नै केन्द्रीय समितिको निर्वाचन भएको थियो । त्यसरी अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा महाधिवेशनको समापन भएको थियो । ती तथ्यहरूको तोडमोड गरेर महाधिवेशनमा जनवादको हनन् भएको थियो भन्ने आक्षेप कति निराधार छ ? स्वतः स्पष्ट छ ।
४. महाधिवेशनभन्दा पहिले बहुमतको पक्षमा वातावरण तयार पार्नको लागि कैयौँ केन्द्रीय सदस्यहरूमाथि कारवाही गरियो वा जिल्लाहरूमा पनि फडानीको काम गरियो भन्ने आक्षेप पनि निकै लगाउने गरिएको छ । त्यस सिलसिलामा कतिपय व्यक्तिहरूको नामको सूची समेत प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम हामीले के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो पार्टी भूमिगत पार्टी भएको हुनाले हामीले महामन्त्री र केन्द्र, प्रदेश वा जिल्लाका प्रवक्ताहरू बाहेक घोषित रूपमा कसैलाई पनि चिन्दैनाँैं । त्यसैले विभिन्न अनलाइन वा पत्रपत्रिकाहरूमा दिइएका नामहरू असम्बन्धित भएकाले तिनीहरूबारे कुनै चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्न । तर, विषयमाथि प्रकाश हाल्नको लागि पार्टीभित्रको अनुशासनको प्रक्रियाबारे केही चर्चा गर्नु अप्रासाङ्गिक हुने छैन । पार्टीको अनुशासनको आधार जनवादी केन्द्रीयता र छलफलको स्वतन्त्रता तथा कामको एकता हुन् । त्यसअनुसार नै पार्टीका विधान वा नियमहरू बनेका हुन्छन् । त्यसप्रकारका विधान वा नियमहरूको उल्लङ्घन गर्ने पार्टी सदस्य, त्यो जतिसुकै माथिल्लो तहको भए पनि, अनुशासनका कारवाहीहरू हुने गर्दछन् । त्यसअनुसार पार्टीको अनुशासनको उलङ्घन गर्ने पार्टीका केन्द्रीय समितिदेखि तल्लो तहसम्मका कैयौँ सदस्यहरूमाथि पार्टीको विधान र नियमअनुसार कारवाही हुने गरेको छ । यो नियमित रूपले चल्ने प्रक्रिया हो र महाधिवेशनको तयारीको कालमा पनि पार्टी अनुशासनको उलङ्घन गर्ने पार्टी सदस्यहरूमाथि त्यसप्रकारका कतिपय कारवाहीहरू हुने गरेका छन् । त्यसरी कारवाही गर्दा विचार वा मतलाई आधार बनाउने गरिएको छैन । त्यो कुरा बहुमत पक्षका पनि उच्चतहका कतिपय नेताहरूमाथि त्यसप्रकारको कारवाही गरिएको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ ।
महामन्त्रीले नातावादलाई प्रश्रय दिएको भन्ने आक्षेप पनि निकै लगाउने गरिएको छ । सर्वप्रथमत नातावादको अवधारणाबारे पनि केही स्पष्टताको आवश्यकता छ । कुनै व्यक्ति पार्टीमा लागेपछि वा पार्टीको कुनै उच्च कमिटीमा पुगेपछि उसका नाता पर्ने व्यक्तिहरू, पत्नी, छोरा, ज्वाई, सम्धी, ससुरा, मामा, भान्जा, बहिनी, छोरी, फुपु, दाजुभाइ आदिलाई पार्टीमा ल्याउन मिल्छ वा मिल्दैन ? त्यसबारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि नातावादको विचारलाई अमूर्त प्रकारले लिने हो भने पार्टीको कुनै उच्च कमिटीमा भएको व्यक्तिका नाता पर्ने व्यक्तिहरू पार्टीमा प्रवेश गर्दछन् भने त्यो नातावाद हुनेछ । त्यसप्रकारको नातावादलाई रोक्नको लागि पार्टीमा पहिले प्रवेश गर्ने वा कुनै उच्च पदमा पुग्ने व्यक्तिका नाता पर्ने सबै व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेछ । तर, अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा र नेपालमा पनि पार्टीको विधानमा त्यसप्रकारको कुनै नियम बनेको छैन र त्यसप्रकारको नातावादलाई रोक्न कुनै नियम बनाउनपर्छ भनेर अहिलेसम्म पार्टीको कुनै कमिटी, भेला, सम्मेलन वा महाधिवेशनमा पनि कुनै प्रस्ताव ल्याइएको छैन ।
रूसमा लेनिनका साथै क्रूप्सकाया पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा थिइन् रपछि रूसमा क्रान्ति भएपछि उनले विभिन्न मन्त्रालयको काम पनि सम्हालेकी थिइन् । चीनमा माओका साथै चियाङचिङ पनि पार्टीको नेतृत्वमा थिइन् र उनलाई पार्टीका कैयौँ महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू दिइएको थियो । के त्यो कारणले लेनिन वा माओमाथि नातावादको आरोप लगाउनु ठीक हुनेछ ? भारतको कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि कतिपय पति र पत्नी साथसाथै पार्टीको पीवीमा भएका र केरलमा पार्टी सरकारमा जाँदा पति र पत्नी दुवै जना साथसाथै मन्त्रीहरू भएका उदाहरणहरू पनि पाइन्छन् । के यी सबैलाई नातावाद भनेर विरोध गर्न मिल्दछ ?
त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले पार्टीमा महामन्त्रीले नातावादलाई प्रश्रय दिएको भनेर जुन आलोचना वा आक्षेप लगाउने गरिएको छ, त्यसप्रकारको सोचाइ माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र स्वयं हाम्रो पार्टीभित्रको प्रचलन र अभ्यासका पनि कति विरुद्ध छ ? बुझ्न गाह्रो पर्दैन । वास्तवमा त्यसप्रकारको सोचाइ कुनै सिद्धान्तमाथि आधारित नभएर विशुद्ध द्वेषपूर्ण पूर्वाग्रहयुक्त भएको कुरा पनि प्रष्ट छ । निश्चय नै, त्यसको अर्थ नातावादको अवधारणा र त्यससम्बन्धी आक्षेप जुनसुकै अवस्थामा पनि गलत हुन्छ भन्ने होइन । पार्टीमा कुनै व्यक्तिको आफ्नो पृष्ठभूमि वा क्षमता बिना खालि नाता परेको कारणले नै कसैलाई उच्च पदमा राखिन्छ वा कुनै उच्च जिम्मेवारी दिइन्छ भने त्यो नातावाद हो र त्यसलाई सही भन्न सकिन्न ।